Dowladda Soomaaliya oo Daah Fureysa Barnaamij Ballaaran oo Shaqo Abuur ah
Tuesday November 14, 2017 - 16:58:46 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Mas'uuliyiinta Soomaaliya oo kaashanaysa Bangiga Adduunka, ayaa daah furay wareegii koowaad ee maalgelinta shaqo abuurka ee Bangigu bixiyey.
Sanduuqa Kobcinta hal abuurka Ganacsiga Soomaaliya (SBCF) wuxuu taageeri doonaa 150 ilaa 200 oo gacansato Soomaali ah oo ka kala socda dhamaan wadanka.
Qiyaasta 3,500 oo shaqo ayaa barnaamijkaan lagu abuurayaa, taasoo 30% ay gaar u tahay haweenka, waxaana shaqooyinkan la abuurayo ka hawl gelayaan dhamaan wadanka oo dhan, iyadoo shaqooyinkaan la abuurayo ugu danbayn bisha June ee sanadka 2018. Sanduuqa SBCF wuxuu ku shaqaynayaa aasaas ku xadaysan cidda buuxisay shuruudaha iyo taxadarka la siinayo cidda ka faa’iidaysanaysa. Wuxuu sidoo kale dhisayaa sidii looga baran lahaa casharo la mid ah sanduuqii uu Bangiga Aduunku ka hirgeliyey Somaliland, sanduuqaas oo lagu magacaabo Sanduuqa Ganacsiga Somaliland oo soo socday ilaa sanadkii 2012-2015.
"Kordhinta fursadaha shaqo waa rabitaanka hawsha Bangiga Aduunka” sidaas waxaa yiri Hugh Riddell, oo ah u qaybsanaha Bangiga Aduunka ee Soomaaliya. "Helitaanka maaliyadda waxay cadaynaysaa in si wax tar leh loo abuuro shaqo, kor loo qaado dakhliga canshuurta, dhiiri gelinta cadaaladda iyo kor u qaadista hal abuurka figradaha cusub” ayuu ku sii daray hadalkiisa.
Ujeedada sanduuqaan SBCF ayaa ah inuu maalgeliyo ganacsiga Soomaaliya si loo taageero kor u qaadista, kordhinta shaqada iyo horumarinta qaybaha muhiimka ah. Sanduuqa SBCF wuxuu khaas u yahay ganacsiga, kaas oo ah in xoogga lagu saaro naqshadaynta figradaha hal abuurka ee cusub, wax soosaarka iyo suuqyo cusub oo gobolka ah. Sidoo kale waxaa loogu tala galay xoojinta ganacsiga iyo adeegyada farsamada warshadaha si loo dhiso khibradda dhinacyada beeraha, xoolaha, tamarta iyo qaybaha kale.
Daah furkaan waxaa ka soo qayb galay saraakiil sar sare oo ka tirsan dawladda FS, kuwaas ka kala socday xafiiska Raysal Wasaaraha, Wasaaradda Maaliyadda, iyo hawl wadeenada mashruuca fulinaya, sidoo kale waxaa ka soo qayb galay dadka ganacsiga ku jira ee iyagu ku guulaystay lacagaha sanduuqaani bixinayo.
Soomaaliya ayaa ah wadan ku horumarsan hal abuurka ganacsiyada gaarka loo leeyahay,iyagoona ka ah dhaqaalaha wax soo saar ee wadaka 90% wax ka badan. Sidaa darteed, helitaanka dhaqaalaha oo xadidan, xirfadaha oo yar, shuruucda oo xadidan iyo awoodda hay’addaha maamul si loo taageero dhaqaalaha iyo horumarinta qaybaha gaarka loo leeyahay oo yar waxay adkaysay sidii lagu heli lahaa in kororka dhaqaluhu noqdo mid joogto ah. Sidaan ka warqabno sanadkaan abaaruhu waxay kor u sii qaadeen nuglaanta ka jirta gobolka iyo in si deg deg ah loogu bahan yahay maal gashi si loo fududeeyo soo kabasho degdeg ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo shaqada ah.
Sanduuqa SBCF wuxuu hoos tagaa barnaamijka SCORE oo ah Hay’adaha aasaasiga u ah dhaqaalaha Soomaaliya iyo barnaamijka fursadaha. Barnaamijka SCORE waa mashruuc ujeedkiisu yahay in lagu hormariyo duruufaha ay ku shaqeyaan ganacisyada gaarka loo leeyahay iyo horumarinta qaybaha maaliyadda, dhiiri gelinta maal gashiga ee waxyaabaha gaarka loo leeyahay iyo abuursita shaqooyin gudaha Soomaaliya. Waxaana maal geliyey Sanduuqa deeqaha isku dhafka ah ee MPF ee Baanka Aduunka.
Sanduuqa deeqaha isku dhafka ah MPF wuxuu si dhow ula shaqeeyaa maamulada Soomaaliya, waxyaalaha uu qabtana waxaa ka mid ah dhismaha hay’addaha maamulka, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta magaalooyinka. Sanduuqa MPF waxaa dhinaca maaliyadda ka taageera dawladda Ingiriiska, waaxdeeda deeqaha dibadda ee loo soo gaabiyo DfID, Midowga Yurub (EU), Hay’adda Horumarinta dibadda ee Sweden (SIDA), Safaaradda Norway, Hay’adda horumarinta caalamiga ah ee Denmarka (DANIDA), Hay’adda iskaashiga horumarinta Swiserland (SDC), Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Finland, Hay’addaha Deeqaha Dibadda ee Maraykanka (USIAD), Wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Talyaaniga, Maamulka Baanka Aduunka iyo Sanduuqa dhismaha nabadda ee loo soo gaabiyo (SPF).
Muqdisho:Hassan Hirsi, +252 619 494 237,somaliampf@worldbank.org
Hadaad rabto faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan shaqooyinka Baanka Aduunku ka qabto Soomaaliya fadlan booqo fadhiga internetka:www.worldbank.org/en/country/Somalia